ပါဠိ ပါမောက္ခဆရာကြီး အဟ်မဒ်ကာစင်မ် | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« “ဖွတ်မရ ( ကြံ့ ဖွတ် ) ၊ ဒါးမဆုံး ( တရား ဓမ္မ )”
မြန်မာနိုင်ငံ သို့ အစ္စလာမ်ရောက်ရှိလာပုံ »
ပါဠိ ပါမောက္ခဆရာကြီး အဟ်မဒ်ကာစင်မ်
ပါဠိ ပါမောက္ခဆရာကြီး အဟ်မဒ်ကာစင်မ် (B.A., B.Es.)
ပါဠိ ပါမောက္ခဆရာကြီး အဟ်မဒ်ကာစင်မ် (B.A., B.Es.) (၁၈၈၉-၂၂ နိုဝင်ဘာ ၁၉၅၄) တက္ကသိုလ်သုံးဝေါဟာရများကို ပထမဆုံး မြန်မာပြန်ဆိုသူများအနက် ပါဝင်ခဲ့သူ ၁၉၃၀ ပြည့်နှစ်မတိုင်မီက တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသည် ပါမောက္ခကို Professor တက္ကသိုလ်ကို့ University ဟု အင်္ဂလိပ်လို ခေါ်ခဲ့ရသည်။
၁၉၃၀ ပြည့်နှစ်ရောက်သောအခါတွင် ဆရာကြီးသခင်ဘသောင်းက အတွင်းရေးမှူး အဖြစ်ဆောင်ရက်ပြီး တက္ကသိုလ်သုံးဝေါဟာရများကို မြန်မာပြန်ဆိုသည်။ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြန်ဆိုသူများတွင် ထိုစဉ်ကွပါဋ္ဌိကထိက ဆရာကြီး အဟ်မဒ်ကာစင်မ် ပါဝင်ခဲ့သည်။ အင်္ဂလိပ်ခေတ်၌ အင်္ဂလိပ်အစိုးရသည် မြန်မာနိုင်ငံတင် ပါဋ္ဌိ ပထမပြန်စာမေးပွကိစ္စများကို စီစဉ်ဆောင်ရက်ရန်ွဲပါဋ္ဌိဘာသာ ပညာရေးအဖွ့တစ်ခုဖ့ပေးထားသည် ထိုအဖွဲ့၌ အစိုးရခန့်အဖွ့ဝင်အဖြစ် ပါမောက္ခအဟ်မဒ်ကာစင်သည်ွဲဦးလူဖေဝင်း၊ ဒေါက်တာသိမ်းမောင်၊ ဝဇီရဗုဒ္ဓိ ဦးဖိုးစိန်၊ ဦးဘရုပ်တို့နှင့်အတူ ပါဝင်ခဲ့သည်။ ဆရာကြီးအဟ်မဒ်ကာစင်သည် ၁၉၁၀ ပြည့်နှစ်တင်ွစတင်ဖ့စည်းသည့်ွဲ မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနအသင်းတွင် ဥက္ကဌအဖြစ် ဆောင်ရက်ခဲ့သည်။ အသင်း၏ နာယကမှာ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် သခင်နုဖြစ်ပြီး ဥက္ကဌမွှာခန်ဆာဟစ် Aကာစင်B.A ဖြစ်သည်။ ဒုတိယဥက္ကဌမှာ ဆရာကြီး ဦးဖေမောင်တင်နှင့် ဂျီအိပ်ခ်ျ လုစ် တို့ဖြစ်သည်။ ဆရာကြီးအဟ်မဒ်ကာစင်သည် ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန် မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုရန်အတွက် ၁၉၄၈ ခု၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက်နေ့တင်ွစတင်ဖ့စည်းခဲ့သည့်ွဲ ကုရ်အာန်ဘာသာပြန် စာပေပရိယတ္တိ ကော်မတီတင်ွပါဝင်ခဲ့သည်။ ကုရ်အာန်ဘာသာပြန်ဌာနကို ကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်၍ ကော်မတီစတင်ဖွဲ့စည်းသည့် ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်နေ့မှ ကွယ်လန်သည့် ၁၉၅၄ ခု နိုဝင်ဘာ ၂၂ ရက်နေ့အထိ ဘာသာပြန်စာမူ တည်းဖြတ်ရေးအဖွ့တွင် သဘာပတိအဖြစ်ွဲ ဆောင်ရက်ကာ ဘာသာပြန်စာမူကြမ်းများကို တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။ ဆရာကြီးသည် အရဗီ၊ ဖာရစီ၊ အူရဒူ၊ ပါဋ္ဌိနှင့်ွအင်္ဂလိပ်စာပေတို့တင်ွအကြံဥာဏ်ပေးခဲ့သည်။ ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံ အစ္စလာမ်စာပေသမိုင်းတွင် ဒေါက်တာ ဟာဂျီ အရဗီဘာသာစကားနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အဗ္ဗဒူလ်ဂဖူရ်(ခ)ဦးဘချို၊ မော်လဝီ ပထမဆုံး မုဟမ္ဓဒ် ကျွမ်းကျင်သည်။ ကုရ်အာန်ဘာသာပြန်ဆိုမူနှင့် ပတ်သက်၍ အများဆုံး အဘိဓာန်ကြီးဖြစ်သော “ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်ကြီး အရဗီ၊ အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာအဘိဓါန်” (၁၉၄၁)ကိုလည်း ကြီးကြပ် စစ်ဆေးပေးခဲ့သည်။ ထိုအဘိဓာန်ကို ရဟမတွလ္လာဟ်ဆပ်၊ မော်လဝီ အဗ္ဗဒူရာမန်နဒ်ဝီဆပ်တို့က ဘာသာပြန်ဆိုသည်။ စင်္ကာပူမြို့ အငြိမ်းစား တရားသူကြီး အလ်ဟာဂ်ျဟာဖိဇ် ဂိုလာမ်ဆာရ်ဝါရ(M.A)အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ပြုစုခဲ့သည့် အရဗီ-အင်္ဂလိပ်အဘိဓါန်ကို အခြေခံပြီး မြန်မာပြန်ဆို ဖြည့်စက်ပြုစုခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအဘိဓာန်ကို ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် အရှေ့တိုင်းဘာသာရပ် ပါမောက္ခွဆရာကြီးခါန်ဆာဟစ်ဘ် အဟ်မဒ် ကာစင်မ်က ကြီးကြပ်စစ်ဆေးသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ဆရာကြီးသည် ၁၉၂၃ ခု နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်နေ့တင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် အရှေ့တိုင်းဘာသာဌာန ကြီးကြပ်သူ အဖြစ်ဆောင်ရက်ခဲ့သည်။ ) ပညာရေးလောက၌ နှစ်ပေါင်းများစွာ အမှုထမ်းခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ပါဋ္ဌိဌာန၌ ပါမောက္ခအဖြစ် အမှုထမ်းခဲ့သည်။ အသက် ၆၅ နှစ်အရွယ် ၁၉၅၄ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့တင် နှလုံးရောဂါဖြင့် ကွန်လွန်ခဲ့သည်။ဆရာကြီးအား တာမွေကဗရ်စတာန် ဦးရာဇတ်အနီး တွင်မြုပ်နှံထားသည်။
This entry was posted on November 17, 2014 at 10:35 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.